ဒီလို စိတယ် ထင်ပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီလို စိတယ် ထင်ပါတယ်
ဒီလို စိတယ် ထင်ပါတယ်
Posted by ဂျစ်စူ on Jul 29, 2012 in Creative Writing, Myanmar Gazette | 67 comments
(ချောင်းဟန့် ရင်းအီးတစ်လုံး ထွက်သွားသည် ၂ခေါင်းပိတ်ထားပါ )
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ..
လေးစားအပ်ပါသော စာရေးသူ၊ ဖတ်သူ ရွာသူရွာသား အကိုအမများ ခင်ဗျား..
မန္တလေး ဂေဇက်တွင် သင်တို့ နေ့ စဉ် ပုံမှန် ရေးသား၊ တင်ပြပေးလျက်ရှိသော –
၀တ္ထု တို /ရှည် ၊ သုတ ရသ ဆောင်းပါးများ၊ ကဗျာများ၊ ကာတွန်း ဓာတ်ပုံများ စသဖြင့် မရိုးနိုင်အောင် အလွန်ကောင်းမွန်သော လက်ရာများဖြင့် စုံလင်လျက် ရှိနေသည် မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျား ။
အဆိုပါ ကဏ္ဍ အသီးသီးရှိ လက်ရာကောင်းများစွာထဲမှ ဓာတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်များရဲ့ ဓာတ်ပုံလက်ရာကောင်းများကို ဓာတ်ပုံပညာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဦးဆောင်၍ ရွေးချယ် မိတ်ဆက် ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို အားလုံးပဲ သိပြီးကြပြီ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျား..။
ဒီလို အစီအစဉ်ရှိခြင်းအားဖြင့် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ၀ါသနာရှင်အပေါင်းတို့ အနေနှင့်လည်း ဓာတ်ပုံပညာရပ်အား အချိန်တိုတွင်း ချဲ့ ထွင် လေ့လာ ဆည်းပူးခွင့် ရှိခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသည် မဟုတ်ပါလားခင်ဗျား..။
ဓာတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်၊ ပညာရှင် နှင့် ဓာတ်ပုံချစ်သူများမှ ဦးဆောင်၍ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို လစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြင့်
သင်တို့ နဂိုသိထားသော ဓာတ်ပုံပညာရပ်ကို တိုးတက် အစွမ်းထက်လာစေသကဲ့သို့ ပဲ
စာပေပညာရှင် ၀ါသနာရှင်နှင့် စာပေချစ်သူ၊ဂေဇက်ချစ်သူ၊ လူကြီးသူမများ ဦးဆောင်ပြီး မန်းဂေဇက်ချစ်သူ စာပေဆု ဟူ၍
စာပေပြပွဲလေး ကျင်းပနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြသည်ကို သိပြီးကြပြီဟု ယူဆပါတယ်ခင်ဗျား..။
ဒီအစီအစဉ်လေး အကောင်အထည်ပေါ်လာခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ အမှတ်မထင်ရေးသား၊ ၀င်ဖတ်လျက်ရှိသော သုတ၊ ရသ၊ ၀တ္ထု၊ ဆောင်းပါး စတဲ့ စာကောင်းပေမွန်များစွာထဲမှ သင်တို့ သတိမထာမိသော၊ မဖတ်မိသော သင် သို့ မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ စာပေလက်ရာဟာ မည်မျှကောင်းမွန်၊ အကျိုးပြုလှကြောင်း အားလုံးကို မိတ်ဆက်ကြော်ငြာပေး၍ စာရေးသူကို အထိုက်အလျောက် ဆုချီးမြင့်ပေးသွားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
(လောလာဆယ် ကာတွန်း၊ ကဗျာ ကဏ္ဍ ထည့်ဝင်စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိသေး.)
ဆုရွေးချယ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ရွေးချယ်ပုံ အကျဉ်း…
ဒီအစီအစဉ်ကို စတင် ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်သူများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
၁။ Foreign Resident
၂။ ဦးဦး ပါလေရာ
၃။ ကိုပေါက် (မန္တလေး)
အထက်ပါ ဦးဆောင်သူများမှ သင်တို့ ၏ လက်ရာကောင်းများကို အသီးသီး ရွေးချယ်ပေးကြမှာ ဖြစ်သလို စာဖတ်သူ သင်တို့ အနေနဲ့ လည်း သင်တို့ နှစ်ခြိုက်မိသော စာများကို အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ် ဆယ့်သုံးဦးမှ တစ်ဦးဦးအား အသိပေးခြင်းဖြင့် သော် လည်းကောင်း၊ BestWebAwards@myanmargazette.net သို့ သော်လည်းကောင်း နှစ်သက်မိသော ပို့ စ်၏ လင့်ခ် အား ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
ဦးဆောင်သူ လူကြီးများနှင့် သင်တို့ ၏ ကြိုက်နှစ်သက်သော စာမူများမှာ ယေဘူယျ အားဖြင့်
ကိုယ်တိုင်ရေး စာမူဖြစ်မှု၊ အကြောင်းအရာဆန်းသစ်မှု၊တင်ပြပုံအရေးအသားကောင်းမှု၊
အများအကျိုးပြုရည်ရွယ်ချက်ပါဝင်မှု၊သတ်ပုံမှန်ကန်မှု နဲ့ လူအများကြိုက်များမှု ၊အများထောက်ခံမှု စသည့် အချက်များပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ် အမှတ်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား.။ ( ယေဘူယျ အားဖြင့် ပါ )
ထို့ ပြင် စာပေ၀ါသနာရှင်များ၏ စာမူများကို အမှတ်ပေးရွေးချယ်ကြရာ၌ လူမျိုးရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နေရာဒေသမရွေး ခွဲခြားခြင်း မရှိပဲ သတ်မှတ်ထားသော ယေဘူယျ အချက်များနှင့်သာ နှိုင်းယှဉ် ရွေးချယ်ပေးသွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
ရွေးချယ်သူများအနနှင့် လူကိုရွေးချယ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေပဲ ရေးသားသည့်စာကိုသာ ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးကြမှာ ဖြစ်သမို့ဒီရွေးချယ်မှုဟာ ရာနှုန်းပြည့် မျှတမှန်ကန်ရစေမည်ဟု၍ ယူဆပေးကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား..။
လစဉ်လတိုင်း ဒုတိယပတ် မတိုင်ခင် လတစ်လ၏ အကောင်းဆုံး၊ လူကြိုက်များဆုံး ဆိုတာ မည်သည့်စာမူ ဖြစ်ကြောင်း ရွေးချယ်သွားကြပုံကို ရှင်းလင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ် လစဉ် တစ်ပုဒ်စီ ရွေးချယ်ထားတာတွေထဲကမှ နှစ်ကုန်တဲအခါ ပြန်ပြီး တစ်ပုဒ်တည်း ပြန်ရွေးပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံရတဲ့ စာမူကို အမေရီကန်အခြေစိုက် မန္တလေးဂေဇက် သတင်းဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီး စာမူခချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်သလို ရွေးချယ်ရွေးအဖွဲနှင့် ပံ့ပိုးကူညီသူများမှဖြစ်သော
အဘဖောမှ တစ်လ တစ်သောင်း၊ အဘဆွေမှ တစ်နှစ် တစ်သိန်း နှင့် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ မှ တစ်ယောက် တစ်လ သုံးထောင်စီ ပါဝင် အားဖြည့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် အမှတ်တရလက်ဆောင်များလည်း ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(တိုးလာတာရှိရင် အသိပေးပြီး Update ထပ်လုပ်ပေးကြပါလိမ့်မယ် )
ပူးပေါင်း ပါဝင် ကူညီနိုင်..
ဤ မန်းဂေဇက်ချစ်သူ စာပေဆု အစီအစဉ်အား ပါဝင်ကူညီလိုသော ဆန္ဒရှိလျင် ၊ စာပေ၀ါသနာရှင်များ၏
လက်ရာကောင်းများကို အသိအမှတ်ပြု မြေတောင်မြှောက်ပေးလိုသော ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလျင် စာမူရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ ဖြင့် ပူးပေါင်းတိုင်ပင် ကူညီခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်သက်မိသော စာမူလင့်ခ် အား အီးမေးလ် ပေးပို့ အသိ ပေးခြင်းဖြင့်သော် လည်းကောင်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီ နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျား..။
သင်တို့ ၊ ကျနော်တို့မသိသော၊ မရင်းနီးသော၊ အရေးအသားကောင်းသူ၊ အတွေးကောင်းသူတို့ ရဲ့ လက်ရာကောင်းများကိုလည်း ဒီအစဉ်အစဉ်အား ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းဖြင့် ၀ိုင်းဖော်ထုတ် ပေးကြပါစို့ လားခင်ဗျား.။
သင်တို့ ၏ စာပေကောင်းများကို အသိအမှတ်ပြု၊ မြေတောင်မြှောက် ချီးမြင့်၊ မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ ဒီ စာပေချစ်သူ အစီအစဉ်ကို အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြင့် လက်ခုပ်တီး ကြိုဆိုပေးကြမယ်လို့ လဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျား.။ ( အထင် )
ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ယခင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော လင့်ခ်များကို ပြန်ရှာဖတ်လိုပါက.
အောက်မှ လိပ်စာအတိုင်း သွားရောက် လေ့လာကြပါဂုန်။
( မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များသည် လတ်တလော ဆွေးနွေးနေကြသော စာပေချစ်သူဆု အကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖတ်မိဖတ်ရာ ဆွေးနွေးချက်များထဲမှ ကျော် နားလည်သမျှဖြစ်ပါသည်။အမှားအယွင်းများအတွက် တောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား.. )
အားလုံးတိုးတက်ရေးအတွက်မို့ ကျော်လဲ ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား..
သဂျီးလည်း စိတ်ရော လူပါ မအားတဲ့အချိန်မို့ အားနာပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် သဂျီှးဆီက အကြံဥာဏ်ကို ရယူချင်ပါတယ်။
သဂျီးအနေနဲ့က အတွေ့အကြုံများလို့ မှန်ကန်စွာ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
(မိမိတစ်ဦးတည်း သဘောထားကို တင်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)
သဂျီးဆီက အကြံဥာဏ် လမ်းညွန်မှုတော့ ..လောလောဆယ်..မရနိုင်လောက်သေးဘူးလားလို့ ပါ…
အားလုံးလည်း ကျော်နားလည်သလောက် ရေးကြည့်တာမိုလို့မှားတာစိရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျား.
ရေးပါ ကိုကိုထောင် ..ရေးပါ
ရေးကြပါ ရွာသူားတို့… ကျုပ်ကတော့ အမြဲ အားပေး နေမှာပါ …
အရည်အချင်းပြည့်စုံတဲ့ ရွာသူားတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါရစေ…။
အဲ့သည်ဆုကြီးကို မန်ဘာတစ်ယောက်အနေနှင့် ကျုပ်လည်းရဘူးခြင်မိပါရဲ့ဗျာ
ပြဿနာက ဘယ်တော့မှ ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့
ရနိုင်တဲလူဒေဂို အားပေး ကြဒါဘော့ဗျာ..
အီးသာ ထွက်သွားဒယ်..စာကောင်းတော့ ထွက်မလာပါဘူး.. ဆယာ မိုက်ကယ်အောင်ပု ရေ
ဒီလို အပြောင်အပျက် ရေးတာ တောင် လူကြိုက် ဒီလောက် များ နေတာ။ :-)
ပင်လယ် ပျော် says:
ရေးတာကတော့ အရမ်းရေးချင်ပါတယ်…ငယ်ငယ်ထဲက ရည်းစား စာတောင်ဖြောင့်အောင်မရေးနိုင်တော့..ဟီးဟီး..ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားရေးမယ်….
အသိအမှတ်ပြုမှုလေးတစ်ခု (သေးသေးလေး) ပေမယ့်….
အမှတ်တရ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျော်တို့လဲ အားပေးနေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း…..
Do & Don’t (Rules) အမှတ်စဉ် ၃ မှာ မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်ရန်လေး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီနည်း ကျင့်သုံးနေလို့။
နားလည်မှု လွဲနေကြတာလေး တွေ
အတည်ပြုလို့ ရသွားပြီပေါ့ 
ဟိုဘက်မှာတောင် ဘန်းကြီးလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ သူကို ပွားခဲ့ သေးတယ်
ဘယ့် နယ်ကွာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလာပြီးအိုးမဲသုပ်နေတာ
ကို့ လူတို့ လဲ ဝင်ပြောကြဦး
အဲဒါ မိုးပြာတွေရဲ့ သာသနာပြုနည်းပါပဲ။
ဒီရွာထဲမှာ ကျုပ်အထင် ၁၅ ဦးထက်မနည်းရှိပါတယ်။
ဒီလို စိတယ် စိတယ် ပို့စ်ကိုပဲ မျက်ကဲကျပြီး မှားဝင်မိတာ ဒါနဲ့ဆို ၃ ကြိမ် ..
မထူးဇတ်ခင်း …ရယ်တစ်ဆူ … ပြီး နောက်ပြန်လှည့် ….။
ကျော့် ပို့ စ်နဲ့ ကျော့် အတွေးလဲ လေးစားစရာပါ ။
အားလုံးသဘောမျှ လို့ ကတော့ ရွာထဲက ပျော်စရာကောင်း တဲ့ အစီအစဉ် လေးတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။
မမ လို ဘဲ ကျွန်မ လဲ သူကြီး ရဲ့ သဘောထား လေးတော့ သိလိုပါတယ်။
ကျော့် အတွက်တော့ အချက်အလက် တွေကို ထိန်းသိမ်း ရလွယ် မဲ့ အလကားသုံးလို့ ရမဲ့ Open Source Software လေးများ စိ မလား လို့ ရှာကြည့်ပေးပါမယ်။
တစ်ချို့ Software တွေ က Group နဲ့ အလွယ် အလုပ်လုပ် နိုင်ဖို့ ရေးပေးထားလို့ ကျော့် အတွက် ခေါင်းချောက် သက်သာမလားလို့ပါ။
အသေအချာ ရ မယ် လို့ တော့ မပြောရဲ သေးဘူး။
မသုံးချင်တာ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျော့် မှာ အဆင်သင့် သုံးဖို့ စိ နေရင် ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အားမနာတန်း ပြောပါ။
အရီး က တော့ စိတ် မ စိ ပါဘူး ဆို တာ ကို ကျော် စိ အောင် ပြောတာပါ။
မန့်တာ နောက် ကြသွားတာ မို့ လဲ စိတ် မစိ ပါ နဲ့ ကျော်။ ;-)
ဒါနဲ့ အရီး လက်မ က နံပါတ် ၄ မှာ စိ တယ်။
အနော့်လက်မက နံပါတ်၅ မှာ စိတယ်။
စိတဲ့ ကျော့် ကို သဘောကျတယ်
ဒီလို စိတယ် ထင်ပါတယ် ကို ရေးတဲ့ ကျော် ဆိုတဲ့ စိန်ဗိုက်ဗိုက် ရဲ့ အရေးအသား ရွာ့အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ အပင်ပန်းခံနိုင်မှု တွေကို သဘောကျကြောင်းပါ
ကဲ စပြီပေါ့ ဟုတ်လား
ဒီနေ့ မှဘဲ ပြတ်တော့ တယ်
ဝမ်းသာတယ်ဗျို့  လှူနိုင်အောင်လဲကြီုးစားပါဦမည်
ကျုပ်မှာ လကုန်ရက်မို့ ဘတ်ဂျက်နဲနေတာကြောင့်
သခွားသီးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ရောထောင်းပြီး
အဲဒါကြောင့် မရှိမဖြစ်စိန်ဗိုက် လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်မယ်…
အဲဒီလိုစကားကို မပီ အောင် မပြောပါနဲ့ ကိုပါ။
“မစိ မဖြစ်စိန်ဗိုက်” ပါ။
ဒါနဲ့ သခွားသီးနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ရောထောင်းပြီး ကို ငရုတ်သီး (မိုးမျှော်) ပါ ထည့်ရသတဲ့။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာလဲ စမ်းထားသင့်တယ်။
ဂလိုဖြစ်လိုပါ အကြောင်းပြပြီး သမီးလေးတွေ ဆိုင် သွား ရတာပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်လေး တော့ ပျက်စီးသွားပါပြီ..
အမာခံပရိသတ် လုပ်ပေးပါ့မယ်ဗျ ..
ဒီပို့စ်ဂို မလော့အင်ဘဲနဲ့ဖတ်လို့မရဘူး ဘလိုစိလဲခည….
စိန်ဗိုက်ဗိုက် ရေ အဲဒါ ဟုတ်နေတယ် ကြည့်လုပ်ပါအုန်း ။
” Members Only ” လို့ Tag မှာရေးထားတယ် ။
တမင် လုပ်ထားတာထင်တယ် ။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် မနေ့က login မ၀င်ပဲဖတ်တာ ၀င်လို့မရဘူး … login ၀င်မှ ဖတ်လို့ရတယ် …. အော်ဒါက ဒီလိုစိတာကို ….
အခုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ ၄ / ၅ / ၆ လ ခံအောင် လုပ်ကြည့်စမ်းပါဦးကွယ် ။
အသားကျ အဆင်ပြေပြီဆိုမှပဲ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ ထပ်ညှိ
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့ ။
ဒိုင်လုပ်ရမယ့်သူတွေ မလွယ်ဘူးနော် ၊
တာဝန်သိ တာဝန်ယူရင် ယူသလောက် ပင်ပန်းမှာနော် ။
အပြင်က အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လူကြီးလုပ်သလို ၊ မုန့်ဝေ လိမ့်မယ် မထင်နှင့် ။
ဖြစ်ဖို့များတာ ၊ ဒုတ်ဝေတာပဲ ခံရမှာ ။
အဆဲခံရမယ် ၊ သောက်တင်းအချခံရမယ် ၊
ငွေကုန်မယ် ၊ လူပန်းမယ် ၊ စိတ်ညစ်မယ် ။ ဟင်း ၊ ဟင်း ။
ကိုလင်းဝေ ဆိုတဲ့နာမည်ကို တွေ့ရတယ်
အဲ့လူကြီး ဂေဇက်ကို ဖတ်သေးတယ်ပေါ့ ????
တကယ်လုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်။ လုပ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ လူကြီးတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ဒါမှလည်း တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်း တင်လာတဲ့ ပို့စ်တွေ နည်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်တွေတောင် နေ့တိုင်းတက်သမျှပို့စ်တွေကို အလျင်မီအောင် မနည်းလိုက်ဖတ်နေရတာ။ ဒီလိုမျိုး ပို့စ်တိုင်းကို သေချာဝေဖန်ပြီးဖတ်ပေးမယ့် လူကြီးတွေကို တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရမ်းပင်ပန်းမယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ပါတယ်။ မွန်မွန်တို့လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပို့စ်ရဲ့ လင့်တွေကို ပို့ပေးပါမယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပါမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီလိုစိတယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ တွတ်ပီယောက်ဖရေ… ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပါ…
မွန်မွန် အထင်မှားနေပြီထင်တယ် .. ပိုစ်တိုင်းကို သေချာ ဝေဖန်ပြီး ဖတ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
တက်လာသော ပိုစ်များထဲမှ အကြိုက်ဆုံး ကို ရွေး ကြပြီး ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲ ဆိုတာလေးသာ ရေးမှာပါ ။
ဝေဖန် လေကန်ရေးက နဂို ကတည်း က လူတိုင်း လုပ်နေကြတာလေ .. မန့်နေကြတာ ဝေဖန် လေကန်ရေးဘဲလို့ …
စိလိုဟုတ်တယ်နော် စိဗိုက် :grin: :grin:
အယ်… မစ်အန်ဒါစတန်းဒီး ဖြစ်နေပြီထင်တယ်….
အကြိုက်ဆုံးပို့စ်ကို ရွေးဖို့အတွက်က ပို့စ်အားလုံးကို ဖတ်ကြည့်မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလားဟင်…
ဝေဖန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ကင်ဆာ လုပ်ပါတယ်နော်… ဟီး…ဘွာတေး…
အားလုံးကို ဖတ်ကြည့်မှာတော့ ဟုတ်တယ်မလား…. အဟဲ..ပြောချင်တာက ပို့စ်အားလုံးကို အဲလိုလိုက်ဖတ်ဖို့တောင် အမီးတို့က မဖတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ…
ပိုစ်အားလုံးကို မဖတ်မိမှာစိုးလို့ ၁၃ ယောက်ထည့်ထားတာပါတဲ့ ။။ ဖတ်မိတဲ့အကြိုက်ဆုံးလေးတွေ ပြန်ရှယ်တော့မှ ထပ်ဖတ်ဖြစ်ကြပြီး ပြန် ရွေးနိုင်အောင်လို့ လူများများထည့်တာပါလို့ စိပါတယ်ခင်ဗျ…
ဒီမိုရွာဆိုတော့ စကားလုံးက အစဆင်ခြင်နေရတယ် ခင်ဗျ … :grin: :grin:
ဟုတ်တယ်နော် စိဗိုက် …
ရေးမယ်ဗျာ…ရေးမယ်…………….လောလောဆယ်တော့ 3000 ပြည့်ဖို့ 10 ကပ်လိုနေလို့ ယူသွားပြီဗျို့……..
အလဲ့………… 15 ကျပ်တောင်ရသဗျ….. ပျော်ထှာအေ…………
member only ဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်တတ်ဘူး
Category မှာ member only ရွေးလိုက်ပါခင်ဗျား…
ဒီဆုကို အနော်လည်း ရဖူးချင်ဘာဒယ် ..
အနော်လည်း ကြိုးစားပြီး ရေးပါ့မယ် အာစိ ..
သို့ပေမယ့် ဂလို စာမျိုးတွေ ရေးဖို့တွေးလိုက်တိုင်း
ခေါင်းက အလုပ်လုပ်ရတာ များသွားပီး
ဗိုက်ထဲက ဂွီဂွီနဲ့ မြည်လာတတ်တယ် ..
အဲ့အခါ တစ်ခုခု ကြိတ်လိုက်တယ် ..
ပီးဒေါ့ ဗိုက်တင်းတွားဒယ် .. အိပ်ချင်တွားဘာဒယ် ..
ဂလိုနဲ့ ရေးဖစ်တော့ပြန်ဘူးရယ် .. ဟီဟိ ..
ဂလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အစီအစဉ်အတွက်
အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက်လည်း
ဝိုငးဝန်း ကူညီ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ….
အင်း အားလုံးကောင်းရင်တော့ အားလုံးကောင်းသွားမှာပါပဲလေ။
ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ပေရေ။ အမြဲတမ်း အားလုံးကိုတော့ လည်း မဖတ်ဖြစ်တာ ဝန်ခံရမယ်။
ခုတလောတော့ အချိန်သိပ်မရလို့ ဘာမှ ကွန်မန့်ဝင်မပေးဖြစ်တာပါ။
ကံကောင်း..ထောက်မ လို့ ..အကြောင်းညီညွတ်လို့ရခဲ့ရင်တော့..
ရတဲ့ ဆုငွေ နဲ့ 
ဂျယ်လီ ၀ယ်စားမယ် ။
ယေဘုယျအားဖြင့် လက်တလောတင်ထားတာတွေကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဖတ်သွားပါတယ်။
အရင်က တော့ ကြုံသလိုဖတ်တယ်။
သုံးပုဒ်လို့ပြောပေမယ့် ကျနော်ဖတ်သမျှ တစ်ပုဒ်ထဲဘဲကြိုက်ရင် တပုဒ်ထဲဘဲတင်ပေးလိုက်မှဗျို့.
အကြိုက်ကိုရွေးဆိုမှဖြင့် မကြိုက်ပဲ ဘယ်ရွေးလို့ဖြစ်မလဲ…
တစ်လလုံးမှာ တစ်ပုဒ်ပဲကြိုက်ရင်တပုဒ်၊ နှစ်ပုဒ်ပဲကြိုက်ရင်နှစ်ပုဒ်ပေါ့…
ကျွန်တော်လဲ နဲနဲ ပိုဖတ်ဖြစ်သွားပြီး
ကြိုက်တာလေးတွေ့ရင် ထပ်မဖတ်ရတော့အောင် တန်းမှတ်ထားလိုက်တော့တယ်။
အာမယ်……. ပုလင်းထဲကအတွးဒွေဂလဲ ရှယ်ပဲဝေါ်…
နင် သိပ်ရမ်းဘလန်းခါမနေနဲ့ အတွေကောင်းတွေထွက်ကျကုန်လိမ့်မယ်
စာမူလင့်ခ် ပေးပို့ ရမဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာ မှာ BestWebAwards@myanmargazette.net ဟု အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
သို့ ပါ၍ အဆိုပါ BestWebAwards@myanmargazette.net အီးမေးလ် သို့ သာ ပေးပို့ ပေးကြပါကုန်။
ဤ အီးမေးလ် လိပ်စာမှာ စာမူ စုစည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသဖြင့် စာမူရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ
ကျေးဇူးပြု၍ မပေးပို့ ကြပါနှင့်ခများ..။
ဦးဆောင်သူများအနေနှင့်လည်း အရင် လတ်တလော ကြေငြာခဲ့သော အီးမေးလ် နေရာ၌ ယခုအီးမေးလ် BestWebAwards@myanmargazette.net ကို ပြန်လည် အစားထိုးပြင်ထားပေးကြရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ညား..။
ကိုဗိုက်က တကယ် အားကိုးရတဲ့သူပဲဗျို့ !
ဒါဆို Aug 1 က စပြီး တင်တဲ့စာတွေထဲက ရွေးမှာပေါ့…
ဂျူလိုင်လ အတွက်လဲ စုစည်းနေကြပါပြီ
အစီအစဉ် ဆွဲ၊ နားလည်အောင် ရှင်းပြနေကြရတာနဲ့နဲနဲတော့ အချိန်ဖင့်ခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်.
ဇူလိုင်လ လဆန်းကနေ လကုန်အထိ ..
လက်ရှိအချိန်ထိ ..စာမျက်ခွက် ၃ လောက် ကနေ ၃၀ အထိ
စာတမျက်ခွက် ပျှမ်းမျှ .အပုဒ်၃၀လောက် နှုန်းနဲ့…
စာမျက်ခွက် နီးပါး ရှိုဒေါ့ … အပုဒ်၉၀၀ လောက် စာရင်းဝင်ရဲ့…
စနေတနင်္ဂနွေ အသေအကျေ ဖတ်ပေတော့ပဲ..
ကိန် ကိန် ဂိန်…
ပိုစ့် လေးဒွေကို ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသူ ရက်စွဲ စတာလေးတွေ
တေဘယ်လ်လေး ဆောက်ထားနိုင်ရင်ကောင်းမှာ …
သည်လတော့ နေ့စဉ်မဟုတ်တောင် ၂ရက်၁ခါလောက် ဖတ်မိသမျှထဲက
ကြိုက်မိတာလေးဒွေ ဘုတ်မာ့ခ် လုပ်ထားမှဗျို့ …
ရွာ့ စာရေးအားက ၁နေ့ ပိုစ့် ၃၀နှုန်းလောက်ဆိုဒေါ့ …
(မယုံမရှိနဲ့ ..ဂနေ့ ပိတ်ရက် ဖြစ်ပါလျက် မြန်မာ (ဆာဗာ)စံတော်ချိန် နေ့လာ ၁နာရီစွန်းစွန်းရှိသေးတာတောင်
ကန်းဖို့ နီးလာပီထင်ပါ့ ..အဟင့်…
ကျော် မျက်မမြင် သန်တန်းကျောင်းက လူတွေနဲ့ခင်ပါတယ်
အူးလေးတို့မဖတ်ဖြစ်တာတွေကို သူများတွေ ဖတ်မိမှာပါ
ဒါကြောင့် လတ်တို့သတင်းပို့ လို့ ရအောင် အားလုံးကို အီးမေးလ် လင့်ခ် ပေးထားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ..
” ကန်းဖို့ နီးလာပီထင်ပါ့ ..အဟင့် ”
မှန်ပါ့ ၊ မောင်ဂီရေ ၊ မှန်ပါ့ ။
အဘတို့က အိုပြီဆိုတော့ သိပ် မထူးတော့ပါဘူး ။
မင်းက လူငယ် ၊ မိန်းမ လည်း မရသေးဘူး ဆိုတော့ ။
မျက်မှန် အထူကြီးနှင့်ဆိုရင် Sex Appeal သိပ်ကျသွားမယ် ။
ဒီလိုသာဆိုရင် မျက်မမြင်စာဖတ်နည်းကိုပြန်လေ့ လာထားသင့် တယ်ဗျို့ 
မျက်စိညောင်းလာရင် မျက်စိမှိတ်ပြီးဖတ်ပေါ့ 
လိုအပ်ရင်ပြောပါ ကြည့် မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်းကို သွားမေးထားပေးမယ်
ဟွယ် အားရပါးရ စိနေကြဆဲ ပါလား ၊ စာပေပညာရှင်များအကြိုက် ။
(ကာတွန်း၊ ကဗျာ) တို့လည်း ဆက်လက် ဆက်လက်
တိုးတက်ပြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။